သုညကို ဘယ်လို ပြောမလဲ - Myanmar Network
သုညကို ဘယ်လို ပြောမလဲ
Posted by Soe Soe Win on January 27, 2015 at 11:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ရင်ဘဲ ထူးဆန်းနေမလား မသိဘူး။ သုညကို သုညဘဲပြောမှာပေါ့လို့ စာဖတ်သူတို့ တွေးကြမှာသေချာပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာတော့ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုခေါ်ရာမှာရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသူတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုရာမှာ တော်ရုံအချိန်ပေး သတိထားပြီး လေ့လာလေ့ မရှိတဲ့ zero ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ် သုညအကြောင်းကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာတော့ မြန်မာစကားလိုမဟုတ်ဘဲ zero ခေါ်တဲ့ သုညကို အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါလေးတွေကို သိထားရင် ဆက်သွယ်ရေးမှာ နားလည်မှုလွဲတာတွေ ရှောင်ရှားနိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် (အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့) telephone conversation ဆိုတဲ့ ဖုန်းပေါ်မှာ စကားပြောတာ၊ video conference ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုလိုင်းပေါ်မှာ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း (အထူးသဖြင့် business environment မှာ) လုပ်လာ ကြပါပြီ။ ပြီးတော့ IELTS ကဲ့သို့သော အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲတွေမှာလည်း listening component ဖြေဆိုရာမှာ၊ ဒီအထာလေးတွေကို သိထားရင် ပိုအကျိုးရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်ကတော့ native speaker မဟုတ်တော့ ‘zero’ ကို ‘zero’ ဘဲခေါ်တာ မထူးဆန်းပေမဲ့ native speaker တွေကတော့ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် စသဖြင့် သူတို့ လာရာ အရပ်ဒေသမှာ သုံးတဲ့အတိုင်း ‘zero’ ကိုအမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ‘zero’ အခေါ် အမျိုးမျိုး ကိုနားလည်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
အခုတော့ အဓိကအားဖြင့် ဗြိတိသျှ နှင့် အမေရိကန်တွေ ဘယ်လိုခေါ်ကြသလဲဆိုတာကိုဘဲ ကြည့်ကြရအောင်။ ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်မှာ ‘zero’ ကို ‘nought’ လို့ တစ်ခါတစ်ရံခေါ်ပါတယ်။
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ အခန်းနံပါတ်တွေ၊ ဘတ်စကားနံပါတ်တွေ၊ ရက်စွဲတွေမှာပါတဲ့ သုည (zero) ကို ‘oh’ အသံထွက်တဲ့ ‘o’ နဲ့ ပြောပါတယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ဥပမာတွေကိုအသံထွက် ဆိုကြည့်ပါ။
ဘောလုံးပွဲရလာဒ်တွေကိုပြောတဲ့အခါ ‘zero’ကို ‘nil’ လို့ ပြောကြပါတယ်။
‘The score was three nil (3-0) to Barcelona’.
အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်မှာတော့ အားကစားပွဲရလာဒ်တွေက ‘zero’ တွေကို အမျိုးမျိုးခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
The Yankees are winning three nothing/ three zero/ three zip.
တင်းနစ်အားကစားမှာတော့ ‘zero’ ကို ‘love’ ဟုခေါ်ပါတယ်။
‘The score was thirty love. (30-0)
ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတုကို ဖေါ်ပြတဲ့အခါ အပူချိန် temperature ကိုပြတဲ့ ‘zero’ ကိုတော့ ‘zero’ ပဲပြောကြပါတယ်။
‘It’s zero degrees Celsius today’ (0°)
ဒဿမကိန်းခေါ်တဲ့ decimal point (အစက်ကလေး) ကို အင်္ဂလိပ်လို decimal point လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ email address မှာတော့ ‘dot’ လို့ ခေါ်တယ်။ ဒဿမကိန်းကိုပြောတဲ့အခါ မမှားအောင် သတိထားရမယ်နော်။
ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်မှာ အဲ့ဒီ decimal point ရဲ့ အရှေ့ရော အနောက်မှာ ရှိတဲ့ သုည zero ကို zero သို့မဟုတ် nought လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်တွေကတော့ nought ကို လုံးဝ မသုံးဘူးနော်။
Decimal point (အစက်ကလေး) ရဲ့ အနောက်မှာရှိတဲ့ zero ကို ‘oh’ လို့လည်းခေါ်လို့ ရပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့ ဥပမာတွေကိုအသံကျယ်ကျယ်လေးနဲ့ ဆိုကြည့်ပါနော်။
0.05 = zero point zero five OR nought point nought five
0.5% = zero point five percent OR nought point five percent.
0.501 = zero point five zero one OR nought point five nought one OR nought/zero point five oh one
နားရှုပ်သွား ကြပြီလား။ စိတ်မပူပါနဲ့။ အင်္ဂလိပ်မှာ practice makes perfect ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ် မဟုတ်လား။ လေ့ကျင့်ရင်း ကျွမ်းကျင် လာမှာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ခွင်၊ သင်ခန်းစာတွေမှာသုံးတာတွေ များလာလေလေ ပြောရတာ သက်တောင့်သက်သာပိုဖြစ်လာလေ ဖြစ်မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ ကဲ…အခုတော့ အောက်မှာရှိတဲ့ ဥပမာလေးတွေကို အသံထွက်ပြီး ၅ ကြိမ်လောက်စီ အားရပါးရ ဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်။
အားမရသေးရင် နောက်တစ်ခေါက်လောက် ကျော့လိုက်ပါဦး။
Englishwithatwist.com မှ Shanti ၏ "How to say zero in English" ကို ကိုးကာဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာတွင် (http://englishwithatwist.com/2013/04/09/how-to-say-zero-in-english/) ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားကို ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် သင်ယူလေ့လာရန် အကြံပြ...
၀ါကျတစ်ခု၏ လေးနက်မှုကို ပေါ်လွင်စေသော အထူးပုံစံများ (Adding Emphasis )
Permalink Reply by eilin on January 28, 2015 at 23:48
i wanna know the exact spelling of nought.Is it 'naught' or 'nought'?Thanks for ur article.
Permalink Reply by ayeaye on February 1, 2015 at 9:16
Permalink Reply by Aung Thu Nyein on February 25, 2015 at 8:25
Permalink Reply by Phyozaw on September 4, 2015 at 1:30
Permalink Reply by apollo on September 20, 2015 at 20:10